Halkan Ka Akhriso Silsiladii “Ila Qosol …” iyo Qanilkii:Cabdullaahi Maxamed Cumar |
Halkan Ka Akhriso Silsiladii “Ila Qosol …” iyo Qanilkii:Cabdullaahi Maxamed Cumar
Nabad iyo caano akhristayaasha sharafta lahoow,
Reer Soomaaliyeed ayaa xilli Jiilaal ah soo dul degey ceel waadaan ama dowlis lagaga cabbo.
Laba ka mid ah haweenkii reerka oo lalamaan -mid waliba wiil sidato- ayaa ceelkii u arooray, si ay biyo uga soo dhaansadaan. Dabcanna, mid waliba inankeeda way xambaarsanayd – sidii caadadu ahaan jirtey. Waxa kale oo mid walba wiilka u dheeraa, haantii (dhiishii) ay soo dhaamineysey iyo waadaan.
Markii ay ceelkii tageen ee ay damceen, in ay biyihii dhaansadaan; ayuu midkood wiilkii ay dhabarka ku sidatay kaga siibtay ceelkii oo uu gunta u tegey. Tii kalana haanteedii ayaa ceelkii kaga dhacday!
Hooyadii wiilku ceelka kaga dhacay, ayaa oohin gar ah ceelkii la dul fadhiisatay. Tii haantu ceelka kaga dhacdayna, baroor iyo ba’ayey ayay la ag fadhiisatay!
Markii ay cabbaar iska ag ooyayeen ee ay midina wiilkeedii u ooyayso ta kalana haanteedii, ayay tii inanku ceelka kaga dhacay, tii kale eegtay oo ay iyada oo la yaabban ku tidhi, “Naa hoo haantan oo iga aamus aan kaa ooyee!”
Allahayoow ma gar!
Imisaa cidlo iyo waxaan caaro ka biirsan
Cisho noolba u ooya!
Oo wixii Caadilku siiyey iyo caanahoodii qubaaya!